England Archive - Gool FM - page 4	twitter
Maamulka Man City oo kalsooni ka muujinaya soo xero galinta Lionel Messi
(England) 19 Mar 2017. Tababaraha Man City Pep Guardiola ayaa doonaya inuu xagaagan la soo wareego Lionel Messi si uu dib ugu dhiso kooxda.
Heshiiska Etihad Stadium lagu keenayo laacibka 5-ta jeer ku guuleystay abaal marinta laacibka ugu fiican addunka ee Ballon d’Or ayaan u fogeyn sida ay u muuqato.
Heshiisa uu xiddiga reer Argentina ku joogo gegada Camp Nou ayaa waxa uu ka dhici doonaa kal ciyaareedka soo socda waxa uuna ku dhibtoonayaa heshiis cusub taa oo dhalin karta inuu xagaagan 
Arsenal oo ku soo biirtay kooxaha doonaya Ross Barkley
(London) 19 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ku soo biirtay tartankan loogu jiro saxiixa weeraryahanka doonaya inuu ka tago kooxda Everton ee Ross Barkley, sida ay warinayso jariiradda Daily Mirror.
Xiddigan xulka qaranka England oo 22-sano jir ah ayey iibin doontaa kooxda Toffees lagu naanayso xagaagan haddii uusan heshiis cusub u saxiixin kooxda.
Chelsea iyo Tottenham oo ka wada dhisan Premier League ayaa la rumaysan yahay inay indhaha ku hayaan inay Barkley ka soo kaxaystaan garoonka Goodison Park, Gunners 
EPL: Chelsea oo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska, kaddib guul ay ka soo gaartay Stoke City iyo kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka… + SAWIRRO
(Stoke) 18 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay guul 2-1 ka soo gaartay naadiga Stoke City oo ay booqatay.
Chelsea ayaa goolka la horreysay waxaana 13’daqiiqo laad xor ah (Free Kick) u dhaliyey Willian, laakiin inta aan la aadin qeybta nashada waxaa 38’daqiiqo gool ku laad ugu barbareeyey Stoke laacibkooda Jonathan Walters, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Chelsea ayaa 
Maxay tahay sababta loo safi waayay Mesut Ozil kulankii ay Arsenal dhawaan guul darada kala kulantay West Brom??
(London) 18 Mar 2017. Tababare Arsene Wenger ayaa ka hadlay sababta uu ku maqnaa Mesut Ozil ciyaartii dhaweyd ay guul darrada 3-1 kala soo kulmeen kooxda West Brom.
Ozil ayaa la sheegay inuu kulanka ku seegay dhaawac muruqa ah oo ka soo gaaray tababarka kooxda Gunners.
Waxaa la arkaa in kubbad qaabeeyaha reer Germany uu sidoo kale seego kulanka saaxiibtinimo uu xulkiisa arbacada la yeelan doono xulka England.
“Wuxuu qabay dhibaato muruqa ah tababarkii shalay ee kooxda waana la daweynayay, ma ahan dhaawac 
EPL: Kooxda West Bromwich Albion oo guuldarro u soo xabaarisay Arsenal oo marti u ahayd xilli labo gool uu ugu shubay Gunners Craig Dawson… + SAWIRRO
(West Brom) 18 Maajo 2017 – Kooxda kubadda cagta West Brom ayaa guuldarro xanuun badan dusha u soo saartay Arsenal oo marti u ahayd kulan ka tirsan Premier League waxaana Gunners kulankan labo gool ugu shubay Craig Dawson.
Arsenal oo marti ahayd ayaa goolka looga naxsaday waxaana 12’daqiiqo karoos uu Nacer Chadli ka soo qaaday gees laad madax ku galiyey shabaqa Craig Dawson, kulanka ayaana Gunners lagu hoggaamiyey 1-0.
West Bromwich Albion ayaa goolka laga soo guday waxaana goolka barbaraha Arsenal u dhaliyey 
Labo dayuuradood oo kala sida boor lagu taageersan yahay Arsene Wenger iyo mid looga soo hor-jeedo oo la dul mariyay gegada The Hawthorns…..+SAWIRRO
(England) 18 Mar 2017. Qaar ka mid ah taageerayaasha Arsenal ayaa dayuurad ay ku mucaaradayaan tababarahooda Arsene Wenger dul mariyay gegada The Hawthorns ee kooxda West Bromwich Albion kulanka ay iminka wada ciyaarayaan ee Premier League.
‘Maya wax qandaraas ah, Bax Wenger’ Ayaa ku qornaa boorkii ay taageerayaasha dul mariyeen garoonka.
Taageerayaasha Arsenal ma ahan kuwii ugu horreeyay ee sidan oo kale sameeya oo waxaa uga horreeyay kuwa Man United oo kiciyay dayuurad sida boor ay ku mucaaradayeen tababarahoodii David Moyes kaa 
Man City oo raadinaysa daafaca Roma ee Antonio Rüdiger
(Manchester) 18 Maarso 2017 – Manchester City ayaa lasoo werinayaa inay £30m oo gini ku doonayaan daafaca AS Roma ee Antonio Rudiger.
Sida ku qoran Daily Mirror, Pep Guardiola ayaa isha ku haya laacibkan caalamiga ah ee reer Jarmal, iyadoo ay wararku sheegayaan inay City laacibka u dirsatay indha indheeyayaal bilihii ugu dambeeyay iyagoo xitaa todobaadka soo aaddan ku tala jira inay la kulmaan wakiilka laacibka.
Laacibkan 24-jirka ah ayaa horraanba loola xiriirinayay kooxda Manchester City sanadkii tegey, balse waxaa koobkii qaramada 
Roy Keane oo si adag uga jawaabay marmarsiyaha Mourinho kadib guushii FC Rostov
(Manchester) 17 Maarso 2017 Halyeeygii hore ee kooxda Manchester United Roy Keane ayaa si adag uga jawaabay hadalkii ka soo yeeray tababare Jose Mourinho kadib guushii FC Rostov.
Mourinho ayaa ku andacooday in kooxdiisu ay ciyaarayso kulamo badan oo hoosta isaga jira wuxuuna intaa sii raaciyay in ciyaartoydiisu ay dareemayaan daal farabadan.
Laakiin Roy Keane ayaa u arka hadalada ka soo yeeray Jose Mourinho kuwo doqonimo ah oo aan loo baahnayn inuu ku hadlo tababare layliya koox Manchester oo kale ah.
“Nolosheyda ma arkin doqonimo tan 
Napoli oo doonaysa kabtanka Man City ee Vincent Kompany
(Napoli) 17 Maarso 2017 Kooxda Napoli ee dalka talyaaniga ayaa doonaysa daafaca ahna kabtanka kooxda Manchester City ee Vincent Kompany.
Tababare Maurizio Sarri ayaa beegsanaya inuu iska adkeeyo daaficiisa xiliciyaareedka dambe, kadib markii xiliciyaareed kan laga dhaliyay kooxda 44 gool tartamada oo dhan.
Mustaqbalka Vincent Kompany ee kooxda Manchester City ayaa ah mid aan la hubin, CalcioMercato.It ayaana baahisay in Napoli ay u dhaqaaqi doonto saxiixiisa dhamaadka xiliciyaareed kan.
30 jirkaan reer Belgium ayaa waqtigiisa intabadan ku qaatay dhaawac, wuxuuna ka maqnaa kooxdiisa City xiliciyaareed kan 